YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, September 04
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/04/20120အကြံပြုခြင်း
Canada is standing by to support Burma’s democratic reform
Canada is standing by to support Burma’s democratic reform By Zin Linn Sep 05, 2012 12:37AM UTC0Comments and 8 Reactions
President of Myanmar (Burma) U Thein Sein received Canadian International Trade Minister Mr. Edward Fast and party at the Credentials Hall of the Presidential Palace on3September 2012, The New Light of Myanmar newspaper said Tuesday. Also present at the meeting together with the President were Union Minister for Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin, Union Ministers at the President Office and departmental heads. The President warmly welcomed the Canadian minister on his first-ever trip to Myanmar (Burma). He said the Canadian foreign minister also paidacall on him on his visit. Burma and Canada have having established diplomatic ties since 1958 and the two countries have openedanew chapter through these two high-level visits, President Thein Sein said. As the political system has changed, the foreign policy of Burma or Myanmar has to set up friendly relations with every nation whether they are from the East or the West, he underlined. The President expressed his optimism for upholding of friendship and cooperation between the two countries. President U Thein Sein received Canadian International Trade Minister Mr. Edward Fast and party at the Credentials Hall of the Presidential Palace on3September 2012. (Photo: www.president-office.gov.mm) The Canadian minister said he was filled with delight by the President’s warm welcome and he witnessed dramatic changes in the country. Mr. Edward Fast continued to say that not only Myanmar citizens but the international community hold the same view that the President spearheaded the reforms. President U Thein Sein expressed thanks the Canadian government for easing the economic sanctions. Canada’s Official Development Assistance to Burma has been suspended since 1988. However, Canadian Government has been working to strengthen democratic forces and civil society, as well as addressing the humanitarian needs of those who have sought refuge outside of Burma. Foreign Affairs Minister John Baird April 24, 2012 announced that Canada will suspend some sanctions against Burma, which were among the toughest in the world. “Canada is encouraged by the changes that have taken place in Burma, especially in the last year,” Baird said. “Today’s move signals our support for the reforms championed by the country’s president and demanded by the Burmese people. President Thein Sein and my Burmese foreign minister counterpart and others in power are to be congratulated for staying true to their word; we also applaud democracy champions like the incredible Aung San Suu Kyi for their commitment and involvement in this process.” “There is more work to be done, but Canada stands ready to support Burma in buildingafree and prosperous society. The easing of these sanctions will help Burma move in that direction and create jobs, hope and opportunity for the Burmese people.” Plans are under way to open Myanmar embassy in Ottawa of Canada. According to the state-run media, the President said on Monday that Myanmar (Burma) is geographically surrounded by vibrant economies, inviting investments in labor-intensive industries, workshops and value-added factories and workshops. Being an agro-based country, the country has held the opportunities to export high-quality agricultural produce, the President said. He displayed the possibility of establishing downstream industries in the country as it hasanumber of rubber and oil palm plantations. More important point the President mentioned is that the country now has the legal framework for safeguarding investors. The President pinned his hope for increase in bilateral trade volume on the Canadian minister. The Canadian minister was accompanied by 26 corporate delegations to seek economic prospects during his visit to Myanmar. As said by Mr. Edward Fast, the Canadian government has set high standards of Corporate Social Responsibility for Canadian companies. President Thein Sein said Myanmar wants assistance from reputable democracies like Canada for continued existence of democracy in his country. He articulated his expectation for investment in factories and workshops of substandard technologies, which he said, is the essential necessity of the country. He tipped the Canadian minister’s trip for improved friendship and increased trade cooperation. The Canadian minister emphasized the economic sanctions were lifted in recognition of human rights and economic reforms in Myanmar (Burma). The Canadian minister madearequest for visa on arrival for Canadian citizens who will invest in Myanmar. Canadian Foreign Affairs Minister Baird said in April, “We encourage the authorities to continue their reforms in order to ensure greater openness and freedom for the Burmese people.” FM Baird added that Canada has been standing by to support Burma’s democratic reform efforts and looks forward to working with the Burmese people as they seek to buildamore democratic and peaceful society. http://asiancorrespondent.com/88794/canada-is-standing-by-to-support-burmas-democratic-reform/
by Ko Nyo on Tuesday, September 4, 2012 at 1:57pm · ဒီကနေ့မိုးသီး..မနက်ဖန် ကျနော်တို့လား..။
နေလိုက်သေးတယ်။ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအတွေးအမြင်ကိုမြိုချလို့ရပေမဲ့ အဆိုးဘက်နွယ်တဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ စာတွေပိုပိုများနေတာ
အားလုံးနီးပါးက ၈၈ကျောင်းသားတွေ၊ပြီးတော့ တချိန်က၊ကျောင်းသားတပ်မတော်ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတွေပါ။
ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲလိုသာမန်ကိုယ့်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတောင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို တတ်စွမ်းသလောက်
ဆိုလိုတာက ပြည်ပရောက်တိုင်းအချောင်သမားတွေ မဟုတ်ဖူး။
အသက် ၂၀ကျော် လူငယ်တွေကိုပညာသင်ဘို့တိုက်တွန်းတော့ “တော်လှန်ရေးဟာကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ဘဲဗျ”
ပြောချင်တာက စစ်ရေးထက် နိုင်ငံရေးကိုအိန္ဒိယပြည်တွေက အားပေးနေတဲ့အချိန်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာ တိုင်းရင်းသားသူပုန်အဖွဲ့တွေ(ချင်း၊ရခိုင်၊ဇိုမီး)အဖွဲ့တွေရှိတယ်။
ထားပါတော့ စစ်ကျွန်တွေ၊ကြံ့ဖွတ်လူတွေကဒီလိုဝင်နှောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာမို့ကွန်မင့်တွေအကြောင်းသိတ်မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီလိုကာလ(အသွင်ကူးနေတဲ့စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ)
နှိမ့်ချရေးစရာမလိုတဲ့လူတွေပါ။ သူတို့နိုင်ငံခြားသားခံထားတာလည်းအခြေအနေအရပါ။ အချိန်မရွေးကိုယ့်နိုင်ငံသားဖြစ်မဲ့သူတွေပါ။သူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသစ္စာမဲ့နေတာမဟုတ်ဖူး။
သေချာတာက သူတို့ဟာ NGOတွေ၊ပရောဂျက်တွေ၊
သူတို့ပြန်လာရင် အခြေအနေအားလုံးနားစွင့်ကြအုံးမှာပါ။မိုးသီးဇွန်တို့က နယ်စပ်မှာကိုယ်ပိုင်ကားတ၀ီဝီစီးပြီး
လတ်လောလေးတင်ဆရာကြီးဒဂုံတာရာက“ကျနော်တို့တိုင်းပြည်၌ ဒီမိုကရေစီပန်းနုရောင်ကလည်း သန်းစအချိန်ဖြစ်ပါသည်၊ထိုသို့သော ဒီမိုကရေစီပန်းနုရောင်ကာလတွင် အချင်းချင်းမေတ္တာဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်ရလောက်သော အနေအထားများဖြင့် ဆက်ဆံကာ မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် အလေးထားလုပ်ဆောင်ရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီနုနယ်သောအချိန်တွင် လှေကိုမလှုပ်အောင် လူးအောင်မလုပ်ဖို့ အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလများအတွေ့အကြုံအရ ယခုကာလကို စိုးရိမ်စွာစောင့်ကြည့်နေရသောအချိန်ဟု ကျွန်တော်ယူဆပါသည်။ ၂၀၁၅ ထိအခြေအနေ တည်ငြိမ်ချောမွေ့အောင်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြ”
ကိုမိုးသီးဇွန်တယောက် ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကားပေါ်တက်ပြီး လူထုကို
စကားပြောတာတွေ့ ရသည် ။ သည်တော့ ပြောစရာတွေ ဖြစ်လာသည် ။
သူသွားမည်ဆိုသည်ကိုလည်း သိသည် ။ ရောက်သွားသည်ကိုလည်း သိသည် ။
ကြိုသည့်သူများကိုလည်း သိသည် ။ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် ကြိုဆိုသည်လား ၊
နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုသည်လားဆိုသည်ကိုလား မပြောတတ် ။
ကြိုဆိုခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့ မှာ ဘာမှ ပြသနာမရှိ ။ သို့ သော်
ကားပေါ်မှာ တက်ပြီး ကိုမိုးသီးဇွန် တယောက်ကဖြင့် ပြည်သူလူထုကို စကားပြောခဲ
့လေပါပြီ ။ ထို့ ကြောင့် သူ့ အကြောင်းကို သိလိုက်ရသည်နှင့် သူ့ လို
ကားပေါ်က လူများ အကြောင်းကို သတိတရ ရှိလာသည် ။
အာဖရိကနိုင်ငံက နစ်ဆင်လ်မင်ဒဲလားကို ကားပေါ်ကနေပြီး
ပြည်သူလူထုကို လက်ရမ်းပြီး နုတ်ဆက်သည်ကို တွေးကြည့်ဖြစ်သည် ။ ထောင်ထဲတွင်
နှစ်ပေါင်း ( ၂၆ ) နှစ်မျှ နေခဲ့ ရသော သူ့ ကို အာဖရိကနိုင်ငံ၏ သမ္မတအဖြစ်
ရွေးချယ်ခဲ့ ရပြီးနောက် ပြည်သူလူထုကို ကားပေါ်မှ နုတ်ဆက်နေသည်ကို မြင်တော့
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ လေးစားခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရသည် ။ မျက်ရည်ကျစွာ
ရန်ကုန်ုကိုတုန်လှုပ်စေပြီး သတိရလွန်းမက ရှိနေပါသည် ။ သို့ အတူ ကားပေါ်မှ
နေပြီး လုပ်ကြံခံရသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၏ သမ္မတ မစ္စတာ ကနေဒီကို
လုပ်ကြံသည့် မြင်ကွင်းကို မြင်သောအခါ အလွန်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် မှတ်မိနေမိသည် ။
အထူးသဖြင့် အမေရိကပြည်ထောင်စုတွင် ကားပေါ်မှနေပြီး လက်ရမ်းပြသော
သမ္မတကို ကျွန်တော်ဘဲ သတိမထားမိလေသလား မပြောတတ် ။ မတွေ
့မိသည်ကတော့အမှန်ဖြစ်သည် ။ သို့ သော် အမေရိကပြည်ထောင်စု သမ္မတများသည်
လူထုများရှေ့တွင် လက်ရမ်းပြပြီး လိုက်လံနုတ်ဆက်သည်ကိုတော့
မြင်နေကျဖြစ်သည် ။ သမ္မတလို့ မှမဟုတ် ။ အမေရိကပြည်ထောင်စုတွင်
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော အနုပညာရှင်များ ၊ အဆိုကျော်များ ၊
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ၊ နိုင်ငံရေးသမားများတို့ သည် ပြည်သူလူထုများအား
ဟောပြောပွဲများ တွေ့ ဆုံပွဲများတွင် ပြည်သူလူထုအား ချစ်စဖွယ်
လက်ဝှေ့ရမ်းပြသောအခါ လူထုများကလည်း သူတို့ ကို အသိအမှတ်ပြု
နုတ်ဆက်သည်ဆိုကာ အထူးလေးစားချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကြသည်ကို မြင်ဖူးနေသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံက- ၈၈-ခုနှစ်အပြီး အာဏာသိမ်းတက်လာသော
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၊
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးခင်ညွန့် ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တင်ဦးတို့ ၏
ဇနီးဖြစ်သူများက သူတို့ ၏ ခင်ပွန်းများနှင့်အတူ ပြည်သူလူထုများကို
လက်ဝှေ့ရမ်းပြသည်ကို မြင်တွေ့ ရသောအခါတွင်ကား စိတ်ထဲမှာ
စူးနေအောင်ခံစားရမိသည် ။ မည်သည့်အကြောင်းအရာတခုနှင့်မျှ မပါတ်သက်ဘဲ
လင်ကောင်းရာ အငြိမ့်သားဖြစ်နေသော သူတို့ သည် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လို
ပြည်သူများကို လက်ဝှေ့ ရမ်းပြရန် မသင့် ။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ အား
ပြည်သူတို့ မှာ မျက်စိစပါးမွှေးစူးကာ ချစ်ခင်မှုမပြဘဲ လူ
့အံဖတ်ဖြစ်သွားကြရပါသည် ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ၊
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက ကားပေါ်မှဖြစ်စေ လမ်းပေါ်မှဖြစ်စေ သူတို့ နှင့်
ကပ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ သားသမီးဖြစ်သူများက ယင်းသို့ ကပ်ပြီး ပြည်သူများအား
လက်ဝှေ့ ရမ်းပြလျှင်ပင် လက်မခံပါက အခြားလူများမှာ ပိုလို့ ပင် လူ
့အံဖတ်များ ဖြစ်သွားရတတ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကားပေါ်မှ လက်ဝှေ့ရမ်းပြသူများအထဲတွင်
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အထူးပင် ကမ္ဘာက
အသိအမှတ်ပြုရလောက်အောင် နာမည်ကျော်ကြားလှသည် ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ
တာရှည်သော ကားပေါ်မှ လက်ဝှေ့ရမ်းပြခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုများအား ကားပေါ်မှ
နုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောသည်ကို ကမ္ဘာတရပ်လုံးက ချစ်ခင်မြတ်နိုးကာ
လက်ခုပ်သံတဖြောင်းဖြောင်းနှင့် ကြည့်ရှုအားပေး လက်ခံကြသည် ။
ကံကောင်း၍လားမသိ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကားပေါ်မှာ အနီးကရပ်နေသူများ
မမြင်မိသည်မှာ ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည် ။ သို့ မဟုတ်က
မျက်စိမုဒိမ်းကျင့်ခံရသလို ဖြစ်နေမည်မှာ သေချာလှပါသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးတော့ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်တို
့လွပ်မြောက်လာသောအခါ မင်းကိုနိုင်ကို ကားပေါ်မှ ပြည်သူများအား
လက်ဝှေ့ရမ်းပြ နုတ်ဆက်မိန့် ခွန်းပြောနေသည်ကို တွေ့ မြင်ရသည် ။
ပြည်သူချစ်သော မင်းကိုနိုင်တို့ ကို ကားပေါ်မှမြင်ရသော
ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ မှာ အလွန်ပင် လက်ခုတ်လက်ဝါးတီးကာ ချစ်စဖွယ်
အားပေးကြသံများ မြင်တွေ့ ရသည် ။ ယခုနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရသော
ရခိုင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဒေါ်စောမြရာဇါလင်းကို ကားပေါ်မှာပင်
မြင်လိုက်ရပြန်ပါပြီ ။ ဒေါ်စောမြရာဇါလင်းမှာ -၈၈-ခုနှစ်
ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းတွင် တဦးတည်းသော တောခိုလာခဲ့ သည့် ကျောင်းဆရာမ
အပျိုရွယ်ကလေးဖြစ်ပြီး -၂၄-နှစ်အကြာမှာ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အဖြစ်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန်
ကားပေါ်မှာ မြင်တွေ့ ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်တွင်းမှာနေပြီး
ပြည်သူများကို နုတ်ဆက်မိန့် ခွန်းပြောသူဖြစ်သလို ဒေါ်စောမြရာဇါလင်းနှင့်
မိုးသီးဇွန်တို့ မှာ ပြည်ပမှနေပြီး ယခုမှ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို
ပြည်တွင်းရှိကားပေါ်မှ နုတ်ခွန်းဆက် လက်ဝှေ့ရမ်းပြ
စကားပြောနိုင်သူများဖြစ်သည် ။ သို့ သော် သူတို့သုံးဦးစလုံးစကားများသည်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် အတူတကွ လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ
ပြောဆိုသံများကို သတိထားမိသည် ။ လေသံများသည် မတိုင်ပင်ဘဲကို တူညီနေကြသည်
။ သို့ သော် တနေ့ က အမေရိကပြည်ထောင်စုမှာ ဖွဲ့ စည်းခဲ့ သော ( IFBNC )
အဖွဲ့ ကြီးမှ ကြေညာချက် တစောင်ကို ထုတ်ပြန်လာသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ၄င်းအဖွဲ
့တွင် ယခင်က ဦးကိုကိုလေး ( ယခုကိုမိုးသီးဇွန် တို့ နှင့်
အတူလိုက်ပါသွားသူ ) ၊ ဦးထွန်းအောင်ကျော် ( ကိုမိုးသီးဇွန်တို့ နှင့်
အတူသွားသူ ) ၊ တို့ဦးဆောင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ ရာ ယခုကြေညာချက်မှာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်
ဦးရဲထွဋ် နာမည်ဖြင့် ကြေညာလိုက်သည်ကို တွေ့ ရသည် ။
ယင်းသို့ ဆိုလျှင် အမေရိကပြည်ထောင်စုမှ ယခုပြည်တော်ပြန်၍ သွားသူများ
စကားများနှင့် အမေရိကပြည်ထောင်စုနေသူများ၏ ကြေညာချက်ကို ကြည့်လျှင်
သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်မှုများ ကွာခြားနေသလို အတွေးအခေါ်ပိုင်းအရလည်း
လွန်စွာကွဲပြားနေသည်ကို တွေ့ မြင်ရသည် ။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေ
မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ။ နိုင်ငံရေးစနစ် ရှင်သန်စေရေး ။
တိုင်းရင်းသားအရေး ငြိမ်းချမ်းပြေလည်စေရေးအတွက် ယခုကားပေါ်မှ သုံးဦးတို
့မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ကြရန်သာ
ဒေါ်စောမြရာဇါလင်းသည်၎င်း ၊ ကိုမိုးသီးဇွန်သည်၎င်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ ဆုံလိုမှု တောင်းခံထားသည်ကို ကြားရသည် ။
တောင်းခံသည်ဖြစ်စေ မတောင်းခံသည်ဖြစ်စေ ခေါင်းသာအယင်ဝင်ပါဟု
ပြောဆိုထားခြင်းခံနေရသော သူတို့နှစ်ဦးအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်
သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဖြစ်အောင် အမြန်ဆုံးတွေ့ ဆုံပြီး
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်သည် ။ သို့ မှသာ
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ဖွံ့ ဖြိုးသာယာနိုင်သွားလိမ့်မည်ဟု
မျှော်လင့်ထားသူများအတွက် အိပ်ချင်ပြေအိပ်မက် တခုအဖြစ်
မှတ်ယူထားလိုက်ရမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ။။။။
John Humphery Freedom Awards handed over to Min Ko Naing Naing and Su Su Nyaw
Canadian Trade Minister meets with Burmese democracy leader
Canadian Trade Minister meeting with DASSK
Daw Aung San Suu Kyi met with Trade Minister of Canada, H.E. Award Fast at 8:30 to 9:30 am at the residence of DASSK 0n 3-9-2012.
Dr. Thaung Htun and Min Ko Naing
Dr. Thaung Htun handed over John Humphrey Freedom Award to Ko Min Ko Naing in Rangoon, Burma on Sept. 3, 2012. The award was granted to him and Dr. Cynthia Maung in 1999 by now defunct Rights Democracy, Canada's international human rights organization.
Dr. Thaung Htun and Su Su Nyaw
Dr. Thaung Htun handed over John Humphrey Freedom Award to Ma Su Su Nway in Rangoon, Burma on Sept. 3, 2012. The award was granted to her in 2006 by now defunct Rights Democracy, Canada's international human rights organization.
Canada is standing by to support Burma’s democrati...
John Humphery Freedom Awards handed over to Min Ko...